FaceTime Windows အတွက် Download 10 PC ကို, desktop & Laptop
1 Windows PC များနှင့် Laptop ကို 32bit များအတွက်ဒေါင်းလုပ် FaceTime – 64နည်းနည်း
1.1 Windows အတွက်လျှောက်လွှာ:
1.2 FaceTime အင်္ဂါရပ်များ:
1.3 FaceTime ၏အအေးဆုံးအင်္ဂါရပ်များ၏အချို့
2 FaceTime များအတွက်လိုအပ်ချက်များ:
2.1 ငါ့ site ကနေပို
Windows PC များနှင့် Laptop ကို 32bit များအတွက်ဒေါင်းလုပ် FaceTime – 64နည်းနည်း
Facetime ကို PC အတွက် download လုပ်ပါFaceTime စွဲမင်္ဂလာပါ! သင် FaceTime app ရဲ့ကြီးမားတဲ့ပန်ကာများမှာနှင့်သင့် iPhone နှင့် MacBook အပေါ်သုံးပြီးခဲ့လျှင်သင်သည်လည်းသင်၏အ Windows PC ပေါ်မှာဒီ app ကိုရှာတွေ့စေခြင်းငှါ.
ပြတင်းပေါက်အဘို့အ FaceTime 10
ပြတင်းပေါက်အဘို့အ FaceTime 8
ပြတင်းပေါက်အဘို့အ FaceTime 7
FaceTime ပြတင်းပေါက်အဘို့ကို download လုပ်ပါ
ပြတင်းပေါက်အဘို့ကို download FaceTime 8.1
ပြတင်းပေါက်အဘို့ကို download FaceTime764 နည်းနည်း
ပြတင်းပေါက်အဘို့အ FaceTime 10 cnet
ပြတင်းပေါက်အဘို့အ FaceTime 10 pc
တစ်နည်းနည်းနဲ့သငျသညျအခြို့လှည့်ကွက်အတိုင်းလိုက်နာရန်လိုအပ်ပါတယ် သင့်ရဲ့ Windows PC ပေါ်မှာ FaceTime ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး install.
ဒီတော့ဒီဆောင်းပါးမှာသင်မည်သို့လုပ်နိုင်သွန်သင်မည်သမျှလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုထောက်ပံ့ပေး FaceTime ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး install ထိုကဲ့သို့သောကို Windows အဖြစ်က Non-ကို iOS platform ပေါ်တွင် 7, 8 နှင့် Window 10.
FaceTime အထင်ရှားဆုံး Apple ရဲ့ဗွီဒီယိုနဲ့အသံခေါ်ဆိုမှု app ကိုတစျဦးဖွစျသညျ. ယခင်တုန်းက, လူတွေရိုးရာဖုန်းများသို့မဟုတ်ဟန်းဆက်များ၏အကူအညီဖြင့်အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ရရန်အသုံးပြုပေမယ့် FaceTime လွန်စွာဒီလမ်းကြောင်းသစ်ပြောင်းလဲသွားပြီ. အခုတော့လူတွေအဆင်ပြေဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုနိုင်သည်, မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ဤ FaceTime app ကို၏အကူအညီဖြင့်ပင်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု.
Facetime ကို PC အတွက် download လုပ်ပါ
ဒါဟာသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုဆယ်လူလာကွန်ရက်ကသို့မဟုတ် Wi-Fi ချိတ်ဆက်မှုမှတဆင့်အခြားသူများကိုချိတ်ဆက်ဖို့ခွင့်ပြု. ဒါဟာအသုံးပြုသူများသည်မိမိတို့၏မိတ်ဆွေများန့်အသတ်ကိုဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုခွင့်ပြု, တစ်ထောကျပံ့, iPod နှင့်အတူမိသားစုနှင့်စီးပွားရေးအဆက်အသွယ်, iPhone ကို, အိုင်ပက်, အွန်လိုင်း videotelephony ကနေတဆင့်, Mac သို့မဟုတ် Windows.
ဒီ app ကိုအံ့သြလောက်အောင်လူတို့တွင်ထိုအကွာအဝေးလျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝများနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်လက်တည်ရှိဖို့ကအလွန်လွယ်ကူအောင်ထားပြီး.
အစပိုင်းတွင်, Apple ကသူ့ရဲ့ iOS နဲ့ Mac OS device များအတွက်လျှောက်လွှာဖွံ့ဖြိုးပြီးနောက်ပိုင်းတွင်အပေါ်, ယင်း၏လူကြိုက်များမှုကြောင့်, ဒါဟာအဖြစ်ကောင်းစွာယခုပြတင်းပေါက်များအတွက်ရရှိနိုင်.
သင်တို့မူကား, Third-party installation ကိုလိုအပ်ပါတယ်သင့်ရဲ့ပြတင်းပေါက်ပေါ်ဒီ app ရှိသည်. ဤဆောင်းပါး၌, ကျွန်တော်ပြတင်းပေါက်များတွင်အသုံးပြုသွားမည်ခံရဖို့ဤလျှောက်လွှာများ၏ stepwise installation ကိုမျှဝေပါလိမ့်မည်.
သငျသညျနောက်ထပ်အကြောင်းကိုသိရန်ဆန္ဒရှိခဲ့လျှင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုဆက်လက်ကျေးဇူးပြုပြီး. ငါတို့သည်လည်းဤလျှောက်လွှာနှင့်စပ်လျဉ်းသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒေတာကိုမျှဝေပါလိမ့်မည်.
ဤဆောင်းပါး၏အဆုံးအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏ပြတင်းပေါက်အပေါ်သင်အကြိုက်ဆုံး FaceTime app ကိုပျော်မွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်.
FaceTime အွန်လိုင်းဗီဒီယိုတယ်လီဖုန်းပေါ်အအေးဆုံးဗီဒီယိုကိုတောင်းဆို apps များထဲကတစ်ခုဖြစ်လာနေသည်နှင့်တူ၏အခြားဧရာမပြိုင်ဘက်ထွက်အုပ်ချုပ်ထားပါတယ် Google က Duo, Skype ကို, WhatsApp ကို, IMO, ဘင်ဂိုကစား နှင့်စာရင်း. ဒီ app ကမြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်ကိုက်ညီအမြင်အာရုံနဲ့ audio ရလဒ်များကိုပေးထိုက်သည်ဖြောင့်မတ်.
ဒီ app ကိုနောက်ထပ်ယှဉ်ပြိုင်အင်္ဂါရပ်ကအသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ interface ကိုရှိပါတယ်ဖြစ်ပါသည်. စျေးကွက် software ကိုအခြားသူများပျော့ဥစ္စာကို bandwidth ပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း.
ဖြစ်နိုင်လူတိုင်းက Windows ပေါ်မှာ Apple ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကလျှောက်လွှာကို install လုပ်ဖို့အဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါ software ကိုဖြန့်ချိ third-party ကုမ္ပဏီများမှ7သို့မဟုတ်နောက်မှ. ယခု, ဒါကြောင့် iPhone ကိုမှပြတင်းပေါက်ကနေ FaceTime မှသင်တို့အဘို့ဖြစ်နိုင်, အိုင်ပက်မှပြတင်းပေါက်, Mac ကိုမှပြတင်းပေါက် & ပြတင်းပေါက်မှပြတင်းပေါက်.
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ FaceTime app ကိုရှိသမျှသည်အခြားသော videotelephony software ကိုမှသာလွန်ဖြစ်ပါသည်. ပုံရိပ်တွေအများကြီးပြတ်သားဖြစ်ကြသည်နှင့်မြင့်မားနှင့်အဓိပ္ပါယ်ပုံရိပ်ယောင်အွန်လိုင်းစျေးကွက်အပေါ်ရရှိနိုင်ရှိသမျှသည်အခြားသောရွေးချယ်စရာအစားထိုးမယ့်ကျက်သရေရှိပါတယ်.
Group မှဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကိုသင်တစ်ချိန်တည်းမှာမျိုးစုံအသုံးပြုသူများကို connect မှဖွ.
အသုံးပြုသူများကို PC နဲ့တူကွဲပြားခြားနားသော devices များနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်, Windows ကို, iPhone ကို, အိုင်ပက်, iPod ကို, မက်.
ဤရွေ့ကားငါတို့သည်ငါတို့၏စာဖတ်သူတွေလျှောက်လွှာကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့ကိုချစ်မယ်လို့သေချာကြောင်းထိုကဲ့သို့သောဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်. ပြတင်းပေါက်တစ်ခု FaceTime app ကို install မလုပ်ခင်အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုနားလည်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့်. အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုပါဝင်သည်
သင့်ရဲ့ပြတင်းပေါက်ဗားရှင်းမှာအနည်းဆုံး XP ကိုဖြစ်သင့်. ပိုကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံ, ငါတို့သည်သင်တို့ပြတင်းပေါက်ရှိသင့်ကြောင်းအကြံပြုမယ်လို့ & သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းဗားရှင်း.
အဆိုပါ CPU ကိုမြန်နှုန်း ထက်မြင့်မားသူဖြစ်ရမည် 1GHz အမြန်နှုန်း.
အဆိုပါ ရမ် တစ်နိမ့်ဆုံးဖြစ်သင့်တယ်2GB အထိ သို့မဟုတ်အထက်.
အဲဒီမှာတစ်ဦးကိုထောက်ပံ့ရပါမည် built-in ကင်မရာ ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများအတွက်သို့မဟုတ်အခြားဒီရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ခရီးဆောင်ထောက်ခံကင်မရာကိုရှာဖွေ.
အဘို့ အသံခေါ်ဆိုမှု, သင်တစ်ဦးရှိရမည် မိုက်ခရိုဖုန်း. သီးသန့်လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ပူပန်အသုံးပြုသူများနှင့်နားကြပ်ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ် built-in မိုက်ခရိုဖုန်း.
အစောပိုင်းက FaceTime က Apple ၏တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက App ဖြစ်ပါတယ်နှင့် developer များသေးသောတစ်ခုတည်းသောပြတင်းပေါက်များအတွက်တစ်စုံတစ်ရာသောဗားရှင်းဖြန့်ချိကြပြီမဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း.
ဒါကြောင့်သင်သာအားလုံး IOS ကိုနဲ့ Mac device များအတွက်အသုံးပြုသော APK ကို format နဲ့တရားဝင် website ကနေဤလျှောက်လွှာကိုရနိုင်. ကံကောင်းထောက်မစွာ Windows အတွက်, ကျွန်တော်တို့ဟာ Third-party အစီအစဉ်များမှတဆင့်သူက install လုပ်ဖို့အွန်လိုင်းရရှိနိုင်အချို့အစီအစဉ်များရှိ.
အန်းဒရွိုက် emulator ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံကိုထည့်သွင်းဖို့ Third-party developer များအားဖြင့်ဖြန့်ချိခဲ့ကြ. ဒီလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာတွေကို software ကိုသငျသညျကို run ဖို့ခွင့်ပြု APK ကို format နဲ့ဖိုင်တွေ FaceTime သင့်ရဲ့ပြတင်းပေါက်ပေါ်. ဒါကြောင့်ပြီးသားသင့် system ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်ဆိုပါက, ရုံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းလိုက်နာ. အဆိုပါသာမန်များအတွက်, ပေးထားသောလင့်ခ်ကနေ BlueStacks ကို download လုပ်ပါကျေးဇူးပြုပြီး:
ဤသည် www.bluestacks.com ၏ပင်မစာမျက်နှာဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် software ဒီတော့ပြန်ထိုင်ပြီးအနားယူလုံးဝဥပဒေရေးရာများမှာ.
အဆိုပါဖိုင်အရွယ်အစားခန့်၏ကြီးမားသည်. 469ကို MB ကြောင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမယ့်အနေဖြင့်ယူပါလိမ့်မယ်.
ဒါကြောင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးနောက်, အဲဒါကို install ထိုသို့ပြုတစ်ချိန်က, သင့်ရဲ့ပြတင်းပေါက်ပြန်လည်စတင်ရန်.
ပွင့်လင်း BlueStacks application ကို start menu ကနေ. ဒါဟာ program ကပေးအပ်ပထမဦးဆုံးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထပ်တူပြုခြင်းကို default apps များအစပျိုးရန်အချိန်ကြာမြင့်မည်. ဒါကြောင့်ကနဦးဖြစ်စဉ်ကိုမနှောက်ယှက်ရ.
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုစတင်ပြီးတာနဲ့, မီနူးသွားပါနှင့် play စတိုး applications များပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ.
ထဲမှာ play စတိုး, ရှာတွေ့ FaceTime ရှာဖွေရေး option ကိုအတွက်.
app ကို Download လုပ်ပါ နှင့် "ကိုကလစ်နှိပ်ပါပွေးသှား"တိုက်ရိုက်ရန် လျှောက်လွှာကို install. သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် ဒေါင်းလုဒ်ဖိုင်ကို save သငျသညျနောက်ပိုင်းမှာတပ်ဆင်ရန်ဆန္ဒရှိလျှင်.
သငျသညျဖို့အဆင်သင့်သောအခါ လျှောက်လွှာကို install သင့်ရဲ့ system ပေါ်တွင်နှင့်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာ.
installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစဉ်အတွင်း, သငျသညျစီမံအုပ်ချုပ်သူကိုအခွင့်အရေးအတွက်သတိပေးခံရစေခြင်းငှါသို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲသူစကားဝှက်ကို သို့မဟုတ် အတည်ပြုခြင်း. မေးမြန်းပြီးလိုအပ်တဲ့စကားဝှက်သို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ.
နောက်ဆုံး, FaceTime အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ သင့်ရဲ့အပေါ်ကိုအသုံးပြုရန် ပြတင်းပေါက်.
ဖန်တီး သင့်ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုသူ id နဲ့ password သငျသညျ login ချင်ပါတယ်အခါတိုင်းနှင့်အတူတူပင်ကိုအသုံးပြုပါလိမ့်မည်.
သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အ app ကို run ပါလိမ့်မယ်တဲ့အခါမှာ, သငျသညျအသုံးပြုသူ ID နှင့် password ကိုရိုက်ထည့်ပါသတိပေးခံရပါလိမ့်မည်. သငျသညျပြီးသားသင့်ကိုယ်ပိုင်သီးခြား user ID နှင့် password ကိုဖန်တီးခဲ့ကြသည့်အတိုင်း, ဒါကြောင့်နောက်ထပ် program ကို run ဖို့ကဒီမှာမလိုအပ်ပါလိမ့်မည်. ကနဦးမူထူးခြားတဲ့ ID ကိုဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုပြုပြီးတာနဲ့, အဓိက interface ကိုပြသပါလိမ့်မည်.
အားလုံးအဆက်အသွယ်ကဆက်ပြောသည်, ဝှက်ထားသောသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့အဓိက interface ကိုကနေထိန်းချုပ်ထားကြသည်. သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှုန်းအဖြစ်ကစိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်ဦးစားပေးကိုသွားပါ. iPhone ကိုလိုပဲ, အိုင်ပက်, iPod ကို & မက်, သင်သည်လည်း Display ရဲ့ setting ကိုကစားနိုင်ပါတယ်. ဒီနေရာတွင်မျက်နှာပြင်ကိုယျတျောသလှည့်ရန်မလိုပါပေမယ့်သင်ရရှိနိုင် options များနှင့်အတူအချို့သောပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်.
သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အ FaceTime သုံးပြီးနေတယ်ဆိုရင်နှင့်ပိုပြီးအကြောင်းကိုသိလို, သင်သည်လည်းအချို့သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်၎င်းတို့၏အထောက်အပံ့ကို website မှာသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်. အဆိုပါ link ကိုကိုအောက်တွင်ပေးထား:
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကိုပိုမိုထိတွေ့မှုနှင့်တိုးတက်မှုများအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကလူကူညီပေးခဲ့. FaceTime တစ်ဦးဘီယာသို့မဟုတ်ခွက်ကိုဖမ်းဆုပ်အကြောင်းကိုမဟုတ်ပါဘူးနှင့်သင့်မိတ်ဆွေများနှင့်သာမိသားစုနှင့်အတူတိုက်ရိုက်ဝေမျှ.
Apple ကအဆက်မပြတ်ပိုကောင်းရလဒ်အတွက် FaceTime သစ်ဗားရှင်းထွက်ရှိခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့်အသုံးပြုသူရဲ့လိုအပ်ချက်သူ့မှာအရမ်းကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်.